चिसोबाट बालबालिकालाई जोगाऔं « LiveMandu
चिसोबाट बालबालिकालाई जोगाऔं
१० पुष २०७८, शनिबार १९:५२
डा. रविन्द्र आचार्य – मौसम निकै चिसो छ । प्रदुषण निकै बढेको छ । यो अवस्थामा बालबालिकालाई बिभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्छन् । रुघाखोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, टन्सिल बढ्ने, ज्वरो आउने, वान्ता हुने, पखाला लाग्ने आदि । पहिले निमोनिया तथा दमको समस्या भएका बालबालिकालाई झनै गाह्रो हुन्छ । कहिलेकाँही एक्कासी सास फेर्न गाह्रो हुने, कोखा हान्ने, घ्यारघ्यार हुने, ओंठ / जिब्रो/ औंला निलो हुने आदि । यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त अस्पतालको इमर्जेन्सीमा लैजानु पर्दछ । कुर्नु हुँदैन । अस्पतालमा अक्सिजन, बाफ, नशाबाट औषधि आदि दिंदा छिटो निको हुन्छ । आफैले औषधि किनेर समय र स्वास्थ्य नष्ट गर्नुहुँदैन ।
बालबालिकालाई दिउँसो घाममा राख्ने, बिहानदेखि रातिसम्म मनतातो झोल पदार्थ खुवाइरहने, न्यानो कपडा लगाइदिने, कान, घाँटी तथा छाती र हातखुट्टामा न्यानो कपडा लगाइदिने, फ्लु तथा निमोनियाको खोप लगाउने, ज्वानो, अदुवा, बेसार, तुलसी, कागतीपानी पकाएर पटकपटक खुवाउने, सन्तुलित आहार खुवाउने तथा घाम नलागेको बेला न्यानो ब्लांकेट वा सिरकभित्र राख्नुपर्दछ ।
बच्चा सुत्ने कोठामा झ्यालढोका बन्द गरेर कोइला बालेर सुत्नु हुँदैन । रातो भएको कोइला वा हिटरले न्यानो बनाउने तर सुत्नेबेला ती कोइला कोठाबाहिर राख्नुपर्दछ । कोठाको भेन्टिलेसन अलिअलि सधै कायम गर्नुपर्दछ । प्रोटिन तथा भिटामिन सि भएका खाना खुवाउनुपर्दछ ।
अलिअलि लक्षण देख्नासाथ नजिकको चिकित्सकलाई भेटेर स्वास्थ्य परिक्षण गराउने तथा उहाँले दिएका औषधि नियमले खुवाउँदा आकस्मिक अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नगण्य हुन्छ । तापक्रम, स्वाश्प्रश्वास तथा अक्सिजनको मात्रा नियमित नाप्नु राम्रो हुन्छ । यस्तो बेला धामीझाँक्री, जान्ने, हेर्नेजस्ता कुराको पछि लाग्नुहुँदैन । जति धेरै सुबिधा छ, त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
#डा. रविन्द्र आचार्य
भारतीय राजदूतावासले झण्डोत्तोलन गर्दै ७३ औं गणतन्त्र दिवस मनायो
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमा २०७८ माघ १२ गते भारतको ७३ औं गणतन्त्र दिवस मनाइयो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत महामहिम विनय
स्कूले विद्यार्थीहरुलाई खोप लगाउन माघ १५ देखि २० गतेसम्म विद्यालय खोलिने
काठमाण्डौ । सरकारले यही माघ १५ गतेदेखि २० गतेसम्म विद्यालय खोल्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका